Diarin'ny mpamosavy – bilaogin'i Santi Molezún. Nosoratana tamin-kitsimpo ary tamin'ny olona voalohany. Aiza no hahafantarantsika ny mpanoratra amin'ny fomba maha-olona sy akaiky ary tso-po.
Diary ny Santi Molezun. Nosoratana tamin-kitsimpo ary tamin'ny olona voalohany. Aiza no hahafantarantsika amin'ny fomba akaiky ny fiainan'ny mpanoratra, ivelan'ny clichés na stereotypes amin'ny hevitra efa noeritreretina mialoha momba ny toetran'ny fahitalavitra sy ny tambajotra sosialy. Avy amin'ity pejy ity dia azonao atao ihany koa ny mamandrika fotoana hifampidinika aminy, na manaraka azy hamaky ity bilaogy ity rehefa nohavaozina.
"Tsy fantatro hoe tsara na ratsy ny fanoratana ny zavatra tsapan'ny olona iray, eritreritra na fiainana ao anatiny, fa fantatro fa ny fanatratrarana ny tanjona dia tsy misy dikany.
Efa an-taonany maro aho no nieritreritra ny hanoratra diary. Efa nividy kahie be dia be aho!: Kely, lehibe, tapa-kazo, tsy misy checker, misy tariby, tsy misy azy.
6 amin'ny volana Desambra
Androany, 6 Desambra, dia andro fialan-tsasatra, iray amin'ireo andro ijanonana ao an-trano mba hankafizana ny elany
7 amin'ny volana Desambra
Nahafinaritra ny andro androany tany am-piasana, tena reraka aho, ny fandefasana taratasy ho an'ny olona samihafa manana olana sy olana samihafa dia asa.
8 amin'ny volana Desambra
Amin'ny andro masina indray isika, ny daty dia ny: "The Immaculate Conception", Oxum, reniko ara-panahy. Arahaba ry neny! Nanolotra ny tenako manontolo maraina aho ho
9 amin'ny volana Desambra
Androany dia naneno ny kiririoka tamin'ny 9 ora sy sasany maraina, isan'andro aho mifoha amin'io ora io, efa nohaniko sakafo maraina 30 gr ny tratran'ny akoho.
10 amin'ny volana Desambra
Indray sabotsy nifoha tara aho, tokony ho tamin’ny 13 ora sy sasany tolakandro, ny fara-tampony tamin’ny maraina Saturnine tao amin’ny efitranoko niaraka tamin’ny
11 amin'ny volana Desambra
Androany alahady, nifoha aho tamin'ny feon'ny findaiko, izay adinoko rehefa natory aho, tamin'ny 6 ora maraina.
12 amin'ny volana Desambra
Androany Alatsinainy, "Shorty" dia "poltergeisted" ny fanaka tao amin'ny efitrano telo tao an-tranoko araka ny nanontaniako. Nanapa-kevitra ny hanova ny zava-drehetra avy amin'ny toerana mankany amin'ny toerana indray aho, hatrany
13 amin'ny volana Desambra
Andro iray ho an'ny mpanjifa, tsy nitsahatra namaky oracle ho an'ny taom-baovao aho, ny asa mahagaga natao tamin'i Mr.
14 amin'ny volana Desambra
Vao haingana aho dia mahatsapa fa hisy zavatra hitranga amiko, mitsikilo zava-misy manan-danja eo amin'ny fiainako aho, saingy tsy azoko atao izany. Sarotra izany
15 amin'ny volana Desambra
Anio alina dia nentin'i Dani nijery rindran-kira nataon'ny Royal Philharmonic of Galicia, tarihin'ny mpitarika, Maestro Manuel.
16 amin'ny volana Desambra
Amin'izao andro izao dia misy Volana feno volam-bolana, izao dia ao amin'ny Cancer, mampiseho fa revolisiona ny olona rehetra. Efa nisy ny fanontaniako
17 amin'ny volana Desambra
Androany sabotsy nifoha tara indray aho, hatramin'ny 2 ora tolakandro dia afaka nandry an'ireo ora rehetra izay notazomiko aho.
18 amin'ny volana Desambra
Tantara tsy mampino momba ny fifampidinihana androany, efa nivady nandritra ny 28 taona izy, fony izy 21 taona dia nivady tamin’ilay lehilahy zokiny 10 taona izy,
19 amin'ny volana Desambra
Tsy misy iverenana ry diary malala fa vao avy nipoitra ampahibemaso ianao, nisy mpanao gazety nahita ny fisianao ka namoaka anao
20 amin'ny volana Desambra
Amin'izao diary malalako izao dia tsy niaina fofonaina aho, satria narary, tsy salama aho tato ho ato, marary mafy aho, izay indraindray
24 amin'ny volana Desambra
Androany aho dia nandeha nisakafo tao an-tranon'i Neny, nandeha nividy fanomezana ho an'ny zana-drahalahiko aho: "Aida" sy "Mateo", faly izy ireo.
«Previous pejy1 pejy2 pejy3 pejy4 manaraka »
©2022-Diarin'ny Warlock / Zo rehetra voatokana